Fianarana avy amin'ny seminera: Ahoana no hametrahana ny URL tonga lafatra ho an'ny SEO?
Ireo fitaovan'ny fikarohana dia mampiasa ny URL mba hanangonana ny angona angon-dry zareo mikajy ny pejy misy ny votoatiny.Ny famolavolana URL dia afaka manova ny fahasamihafana eo amin'ny laharam-pahamehana amin'ny alàlan'ny fanadiovana fikarohana. Zava-dehibe ireo zavatra ireoURL raha ny hafa kosa tsy.
Ny Mpitarika Success Success Manager Semalt Tolotra nomerika, Jack Miller, dia manome toro-hevitra amin'ny fomba hanatsarana ny SEO anao amin'ny URL tonga lafatra.
Ireo Lokom-pahefana Resadresaka (URL) dia mampahafantatra ny navigateurs sy ny server izay ahitana toerana iray - temperature remote monitor.Ireo rohy ireo dia anaty format malalaky ny olona, ​​ary ny anjara asany dia ny manarona adiresy IP mifototra amin'ny laharana ambany.
Ho an'ny URL iray ho raisina ho sariaka, dia tsy maintsy ahitana teny mifanohitra amin'ny lisitra lavataratasy sy tarehimarika. Mahomby izy ireo satria ao anaty endri-dahatsary mamaky azy ary ny fampitomboana ny teny indraindray dia mampifandray azy ireoto search engine. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny tranonkala noforonina avy amin'ny sehatrao dia tsy mahafinaritra. Na izany aza, ny ankamaroan'ny sehatraAmin'izao fotoana izao, dia ahafahanao manoratra URL tsara ny fanovana ny tarehintsoratra sy tarehimarika maromaro ao amin'ny sehatr'ilay tranonkala mampiasa anaran'ny pejy sy lalana.
Diniho ireto ohatra roa manaraka ireto.
Na dia tsy kely lavitra noho izany aza ny URL faharoa, dia afaka mamantatra mora ny zavatraNy mpampiasa tranonkala dia mahazo: pejy iray mifandraika amin'ny akanjon'ny lehilahy.
Mamorona URL tsara
Ireto manaraka ireto ny fepetra momba ny tsara indrindra amin'ny SEO:
Ny URL dia tokony ho fohy araka izay tratra ary tsy misy teny na laharana fanampiny
Ny fisian'ireo endri-tsoratra alphanumerika ao anaty kely fotsiny. Mampihena kely ny fampiasana kely ambanyny mety ho votoatin'ny votoaty.
Ampiasao ny bikan'ny teny tsirairay. Tokony hohalavirina ny toerana sy ny fanadihadiana hatramin'ny fikarohanaNy motera dia mandinika ny teny voasokan'ireny marika ireny ho teny iray lava.
Fampiharana ny teny fanalahidy raha azo atao.
Ny fampiasana teny fanalahidy dia mitondra vokatra tsara kokoa ary mampitombo ny traikefan'ny mpampiasa.
Google dia mikendry ny hampivelatra ny laharan'ny sehatra fiarovana voapetraka ao amin'ny protocol HTTPS.Ny fanadihadiana dia maneho fa manodidina ny 50% ny vokatry ny fikarohana ao amin'ny pejy dia avy amin'ny tranonkala ao amin'ny HTPPS.
Ny fanoloana ny HTTP amin'ny HTTPS dia fiovaovan'ny URL, ary misy fiantraikany goavana.Google dia mihevitra ny fifindra-monina ho tsara tarehy satria heverina ho azo antoka ny protocol. Na izany aza dia tokony ampiharina ny fampitoviana 301 mba hampitombo ny tetezamitaary ny fampisehoana dia mila asiana tombanana mba hamoaka ireo olana mety hitranga.
Hashtags amin'ny URL
Ny votoatin-javatra izay azo tsindriana tsara indrindra dia voatanisa amin'ny fampidirana URL iray ho an'nypejy tokana amin'ny votoatiny. Ny AJAX dia manome URL tokana ho an'ny maromaro amin'ny votoatin'ny pejy, indrindra fa ny fanesorana ireo fitaovam-pikarohana manokanapiraketana pejy izay ahafahany mampifandray ireo famantarana sy ny lanjany.
Rehefa manatsara ny URL
Ny fotoana tonga lafatra hanatsarana ny URL dia sehatra fanavaozana sy fifindra-monina. Amin'ny teknolojia na tranokalamiovaova ny teknolojia, mety hanova ny seha-pifaneraserana ny sehatra, ary izany dia fotoana tena tsara hampidirana ny fepetra momba ny soratan'ny syntax sy ny votoaty.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny URL-tsainao dia tokony ho tsara kokoa raha ilaina izanyantony ara-teknika na fanavaozana ny fepetra mba hialana amin'ny loza.